Modular Content Strategies yeCMOs yeKudzikisira paDigital Pollution | Martech Zone
Zvinofanira kukukatyamadza, pamwe kutokutsamwisa, kuti udzidze izvozvo 60-70% yevashambadzi vemukati vanogadzira inoenda isina kushandiswa. Hazvisi izvi chete kutambisa zvakanyanya, zvinoreva kuti zvikwata zvako hazvisi kushambadza kana kugovera zvemukati, rega kurongedza izvo zvemukati kune ruzivo rwevatengi.
Pfungwa modular content haisi itsva - ichiripo semucherechedzo wepfungwa kwete unoshanda kumasangano mazhinji. Chimwe chikonzero chimiro chepfungwa- shanduko yesangano inodikanwa kuti uigamuchire zvechokwadi - imwe yacho ndeye tekinoroji.
Modular zvemukati haingori zano reumwe chete, hachisi chinhu chekuwedzerwa mune yemukati yekugadzira yekufambisa template kana purojekiti manejimendi nzira kuitira kuti ingori basa-yakavakirwa. Zvinoda kuzvipira kwesangano kushandura nzira iyo zvirimo nezvikwata zvekugadzira zvinoshanda nhasi.
Modular zvemukati, zvakaitwa nemazvo, zvine mukana wekushandura iyo yese yemukati lifecycle uye kuderedza zvakanyanya tsoka yako yezvakarasa zvemukati. Inozivisa uye inogonesa maitiro ezvikwata zvako:
Ronga, ronga, uye ronga zvemukati
Gadzira, Unganidza, shandisazve, uye batanidza zvirimo
Architect, modhi, uye curate zvemukati
Tevera, uye upe ruzivo nezve, zvirimo uye mishandirapamwe
Kana izvi zvichiita sezvinotyisa, funga nezvezvakanakira.
Forrester inoshuma kuti kusimudzira zvemukati kushandisa zvakare kuburikidza ne modular zvikamu zvinobvumira mabhizinesi kuunganidza tsika - ingave yakasarudzika kana yenzvimbo - zviitiko zvedhijitari nekukurumidza kupfuura yechinyakare, mutsara modhi yekugadzirwa kwezvinhu uye manejimendi. Mazuva ezviitiko zve-uye-kuita zvemukati apera, kana kuti zvinofanirwa kunge zvakadaro. Modular yemukati inobatsira kufambisa iyo inogara iripo, inoenderera kutaurirana kuburikidza nekuita zvemukati nevateereri vako nekuita kuti zvikwata zvishande nemabhuraki ega ega zvemukati uye zvemukati seti kusanganisa uye remix yedunhu kana chiteshi-chaiwo zviitiko muchidimbu chenguva yazvaizotora sechinyakare. .
Zvakare, ndezvekuti izvo zvemukati zvinobva zvamira kuve mutengesi wekutengesa uye accelerator zvazvinofanira kunge zviri. Kutora Forrester zvakare
70% yevatengesi vekutengesa vanopedza pakati peawa imwe kusvika gumi nemana svondo rega rega vachigadzirisa zvevatengi vavo ... [ukuwo] 14% yevatengesi veB77B vanotaurawo matambudziko akakura ari kufambisa mashandisirwo akakodzera emukati nevateereri vekunze.
Hapana anofara. Kana zviri kumusoro:
Kana bhizinesi hombe richishandisa inosvika gumi muzana yemari pakushambadzira, mutengo wemukati uri 20% kusvika 40% yekushambadzira, uye kushandiswazve kunokanganisa 10% chete yezvinyorwa pagore, panotove nemamiriyoni emadhora ekuchengetwa.
Kune maCMO, zvakanyanya kunetsa zvemukati ndezvi:
Speed ​​kumusika - tingaite sei kuti tishandise mikana yemusika, titarise zviri kuitika izvozvi asi zvakare kutenderera kana zviitiko zvisingafanoonekwi zvamuka.
Deredza njodzi -Kugadzira kune zvese zvakafanotenderwa zvemukati zvavanoda kuti vaende kudzikisa ongororo uye kubvumidzwa uye kuwana pa-brand, zvinoenderana nezviri kumusika nenguva? Ndeipi mutengo wezita rakashata rechiratidzo? Zvinotora chiitiko chimwe chete kushandura pfungwa dzemamiriyoni (njiva).
Deredza marara - Iwe uri musvibisi wedhijitari here? Ndeipi mbiri yako yekurasa inotaridzika maererano nezvinhu zvisina kushandiswa? Uchiri kutevera kureba, mutsara zvemukati lifecycle modhi?
Scalable Personalization -Masisitimu edu ane chinangwa-akavakirwa kuti atsigire iyo isiri-mutsara gungano yezvinoitika pamunhu pachiteshi zvichienderana nezvaanofarira, nhoroondo yekutenga, dunhu, kana mutauro? Iwe unokwanisa here kugadzira zvine hungwaru kuvaka zvekushandisa panguva yakasarudzika yekuda - yakagadzirirwa iwe nguva - asi zvakare ive nechokwadi chekuteedzera, branding, uye kutonga uye kuvimbiswa kwemhando mukati mehupenyu hwemukati pasina kunetsa, kutora nguva maitiro?
Kuvimba mune yako martech stack - Iwe une vakasimba tekinoroji shamwari uye bhizinesi shasha? Uye, sezvakangokosha, data rako rakabatana pakati peseti yako yekushandisa? Wakambomhanyisa maekisesaizi kufumura izvo zvakasviba uye kugadzira nzvimbo yekuomarara manejimendi uye shanduko yesangano inodiwa kuenzanisa tekinoroji yako yekushambadzira nebhizinesi?
Pamusoro peizvi zvese, Chief Marketing Officer's (CMO) basa ndere kufambisa mhando yako kubva paavhareji kuenda kuhunyanzvi. Ungave uchibudirira kana kusabudirira, mafambiro aunoita nezvazvo, chiratidzo chakananga paCMO pachayo - mabatiro avakaita capital yezvematongerwo enyika, nzvimbo yavo muc-suite, kugona kwavo kutema kana kubvisa mapurojekiti akakundikana uye kutumira mameseji, uye hongu kutambisa, uye kuti zvese izvo zvinotariswa sei uye zvakamisikidzwa kune timu uye kubudirira kwebhizinesi.
Iyo agility, kuoneka, uye kubuda pachena kunodiwa mukushanduka kwepfungwa kunodarika kugadzirwa kwemukati uye ruzivo rwedhijitari. Iyi modhi inotyaira nemaune, zvine chinangwa zvekushambadzira zvemukati zvemukati zvemhando yepamusoro uchishandisa mashoma zviwanikwa, iine zvese zvikamu zvakavakwa kuti zvitsigire chiitiko chega chega, yako diki-mukati kana modularized mabhuroko, ichiva yekumanikidza vawande kuti vakwidziridze zvakanakisa zvirimo zvakanyanya muvateereri vako.
Nekushandisa modular zvemukati sechipo chekuchinja, kune nzira nyowani yekushanda, uri kumisikidza izvo zvaimbove zvisingagoneke kuti ma brand makuru aite. Uye zvinodarika scalability yakachena - uri kubatsirawo zvikwata zvako kuti zvive zvakanyanya kutarisisa mune ramangwana, uri kusimudza vagadziri vako kuderedza kupera simba uye kudhonza kwesangano. Iwe uri kutora danho rekuisa kusimbisira pane izvo zvakangokosha sezvigadzirwa nemasevhisi aunotengesa, uye pakupedzisira, uri kuisa chisungo chekumisa tsvina uye kuona meseji yako, chiono chako, uye chitupa chako, usaite ' t kubatwa neruzha rwekusvibiswa kwedhijitari.
Tags: aprimoseizvemukati lifecyclekugadzirwa kwemukaticontent project managementcontent strategieszvemukati kufambiswa kwebasamodular contentmodular content mazanorepurpose zvemukati